Saadaasha Khuburada Ee Liverpool 2020/2021. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Markii ugu horeysay tan iyo 1990-kii, Liverpool waxay bilaabi doontaa xilli-ciyaareedka cusub ee 2020/2021 iyadoo Difaacanaysa horyaalka.
Reds ayaa ku guulaysatay horyaalkeedii ugu horreeyay muddo 30 sano ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxay 99 dhibcood ka qaadatay 38 kulan (waana wadarta labaad ee ugu sarreysa taariikhda Premier League) waxayna ku dhameysteen 18 dhibcood oo nadiif ah iyagoo ka sareeya kooxda ugu dhow ee Manchester City, inkasta oo xilli ciyaareedkii dhammaadkiisii liverpool aany soo bandhigin ciyaar wanaag.
Liverpool ayaa wajihi doonta kooxda dhawaan soo dallacday ee Leeds United kulankooda furitaanka xilli ciyaareedka 2020/21. Jurgen Klopp ayaa si aad ah u doonaya inuu arko kooxdiisa oo kubilaabeysa qaab ciyaareed wanaagsan isla markaana cabsi hor leh ku abuuraya kooxaha sida Manchester City iyo Chelsea oo si aan caadi aheyn ugu dhex muuqday suuqa kala iibsiga.
hadaba waxaynu qormadan ku eegaynaa saadaasha horyaalka sannadkan 2020/2021.
Liverpool iyo City waxay ahaayeen labada koox ee ugu fiican England labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, xitaa kooxkale umay soo dhowaan labadan kooxood, hadaba sida ay saadaalinayaan khuburada horyaalka.
ingiriisku arintaa waxay is bedeli kartaa marka uu bilowdo xilli-ciyaareedka cusubi, sababta ugu waynina waxay noqonaysaa liverpool oo aan gelin suuqa kala iibsiga, halka man city ay soo gadatay, Nathan Ake (£41m) iyo weliba Ferran Torres (£20.9m, man city ayaa sidoo kale ku dhow inay soo xero geliso Kalidou Koulibaly.
hadaba sida ay saadalinayaan khuburadu horyaalka wuxuu ka degi doonaa magaalada manchester gaar ahaan garoonka Etihad stadium.